सलमानको भारतलाई बोर्डले रोक्ने, अब शुक्रवार मात्रै रिलिजFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
सलमानको भारतलाई बोर्डले रोक्ने, अब शुक्रवार मात्रै रिलिज
फिल्मी फण्डा । विदेशी फिल्म पनि शुक्रवार मात्रै रिलिज गर्नुपर्ने निर्माता संघको धारण आएपछि निर्माता संघकै निवेदनको सुनुवाई गर्ने क्रममा चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र संघलाई जानकारी गराएर विदेशी फिल्म जुनसुकै दिन रिलिज नगर्न पत्र जारी गरेको थियो । त्यस पश्चात कलंक बुधवार रिलिज हुन सकेको थिएन ।
यहि विषयलाई लिएर अरु विदेशी फिल्म रिलिज होला की नहोला भन्ने चर्चा शुरु भएको थियो । आगामी जेष्ठ २२ गते सलमान खानको प्रतिक्षित फिल्म भारत रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ । विश्वभर एक साथ रिलिज हुने भारत नेपालमा रिलिज होला की नहोला ? यस विषयमा आफ्नो धारणहरु वितरक र हलवालाहरुले राखिसकेको छन् । भारत रिलिज हुन्छ, हुनुपर्छ भन्दै क्याम्पेनिङ शुरु गरिसकेका छन् हलवालाहरु ।
यता विकास बोर्डले फिल्मकर्मीको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने सुचना मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले बताएका छन् । नेपाली फिल्मको विकासका लागि कानुनको अधिनमै रहेर विभिन्न सहमति तथा कार्यन्वयहनहरु गर्दा मन्त्रालय तगारो नभन्ने सूचना मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको सबै अधिकार बोर्ड अध्यक्षलाई रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
खुल्ला व्यापार नीतिमा कसैलाई निषेध गर्न पाईदैन । तर, नेपाली फिल्मको अस्तित्व सकाएर विदेशी फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने पनि सचिव गुरुङले बताए । उनले यस विषयमा बोर्ड नै जानकार रहेको र बोर्डले नेपाली फिल्मको पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।सोही विषयमा सुचना मन्त्रालयले पनि फिल्मकर्मीहरुको समस्या बोर्डले सुल्झाउने बताउँदै सबै अधिकार बोर्डलाई रहेको जनाए । काननु विपरितका काम बाहेक नेपाली फिल्मको विकासमा काम गर्न बोर्ड सक्षम भएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।
यता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले फिल्मकर्मीहरुले साथ दिए नेपाली फिल्मको विकासका लागि आफु सदैव अग्रसर भएको बताएका छन् । प्रदर्शन र वितरणको नीति चलचित्र नीतिमा समावेश भएको तर पास नभईसकेको अवस्थामा चलचित्र संघ र निर्माता संघबीचको सहमति अनुसार फिल्म रिलिज हुदै आएको बोर्ड अध्यक्षले बताए । निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सम्झौतामा विदेशी फिल्मको कुरा नसमेटिएकोले अहिले विदेशी फिल्म शुक्रवार रिलिज गर्ने कुरामा चलचित्र संघ तयार नभएको बताए ।
त्यसपछि बोर्डमा विदेशी फिल्मलाई पनि शुक्रवार रिलिजको लागि पहल गरेको उनले बताए । जब सम्झौता भएको दुईसंघबीच सम्झौता टुट्छ, मनमुटाव शुरु हुन्छ तब त्यो सम्झौताको अर्थ हुदैन । नेपाली फिल्मको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्ड नै हो । त्यसैले सहकार्य र समन्वयको लागि बोर्डमा पत्र पठाईएको हो अध्यक्ष अधिकारीले भने । कलंक जस्तै अरु विदेशी फिल्म रोक्न पनि हामी चलचित्र संघसँग बारम्बार अनुरोध गर्दछु । तर चलचित्र संघले मानेन भने हाम्रो सर्वोच्च निकाय बोर्ड नै हो । हामी त्यहि पहल गर्छौं उनले भने ।
अहिले बोर्डले दुबै संघलाई सहमतिमा आउन र सबै फिल्म शुक्रवार मात्रै रिलिज गर्न सुझाएका छन् । तर दुई संघ बैठकमा बस्न सकिरहेको छैन । यस कारण अनिर्णयको बन्दी नहुने अवस्थामा बोर्डले नै विदेशी फिल्मलाई शुक्रवार बाहेक अरु वारमा रिलिज गर्न नदिने जनाएको छ । यसै अनुरुप सलमान खानको भारत नेपालमा शुक्रबार मात्रै रिलिज हुनेछ ।